Siri Remote ayaa magaceeda u bedeshay Apple TV Remote ee tvOS-kii ugu dambeeyay 14.5 beta | Waxaan ka socdaa mac
Siri Remote ayaa magaceeda u bedeshay Apple TV Remote ee tvOS 14.5 beta ugu dambeeyay
Shalay galab, waqtiga Isbaanishka, laga bilaabo Cupertino ayay bilaabeen betas cusub ee dhammaan nidaamyada hawlgalka oo ay shirkaddu ka shaqeyso. Cusboonaysiinta ugu horreysa ee dib loogu eego betaskan waxaa laga helayaa tvOS 14.5. Beta-kan ugu dambeeyay waxaa loo beddelay Siri Remote oo loo yaqaan Apple TV Remote, sida wiilasha MacRumors.
Magaca cusub ee Siri Remote waa Apple TV Remote, waa magac Apple ah waxaa laga isticmaalaa dhammaan waddamada aan Siri laga heli karin, sidaa darteed waxay u badan tahay in Apple ay rabto inay mideyso, mar iyo dhammaanba, magaca amarka maamula Apple TV. Laakiin sidoo kale waxay calaamad u noqon kartaa isbeddelada mustaqbalka.
Marka lagu daro dib u habeynta nidaamka Siri Remote oo dhan, Apple sidoo kale Badhanka Guriga ayaa loo beddelay Qeybta Kontaroolada iyo aaladaha ilaa TV Button, haa, shaqeynta wali waa isku mid.
Waxaan ka hadalnay dhowr bilood suurta galnimada Cusbooneysiinta Apple TV, laakiin waa wada mala-awaal. Mid ka mid ah ayaa tilmaamaya in Apple ay dib u qaabeyn ku sameyn karto buro-kontoroolka, buro kontorool oo ay la socdaan shaqooyin cusub oo ku soo dari doona hawl noo oggolaaneysa inaan ka helno sariirta (halka ay inta badan ka baaba'do).
Apple oo leh TV leh FaceTime?
Waxay u badan tahay in jiilka cusub ee Apple TV uu awoodi karo ku dar kamarad si loogu oggolaado dadka isticmaala inay ka wada hadlaan fiidiyowga iyagoo adeegsanaya FaceTime si ay u siiyaan adeeg u qiil samayn kara iibsiga qalabkan maanta, maaddaama inta badan TV-yada casriga ah ee lagu iibiyo suuqa, ay bixiyaan labada marin ee Apple TV + iyo AirPlay 2.
Sidoo kale waxaa lagu xantaa, kadib luminta HomePod, Apple ayaa laga yaabaa inuu ka shaqeeyo a ku hadla leh bandhig, fikrad aan umuuqan mid meel fog laga keenay maadaama ay noqon laheyd aad ugu eg waxa Amazon hadda ku bixiso Echo Show iyo Google oo leh Nest.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Siri Remote ayaa magaceeda u bedeshay Apple TV Remote ee tvOS 14.5 beta ugu dambeeyay
Kahortagga alaab-qeybiyeyaasha miyey xal u noqon kartaa dillaacyada?
Dacwadii ugu horeysay ee ficil ee ka dhanka ahayd Apple ee ku darista kumbuyuutarka balanbaalis ee 'MacBook'